Matetika isika no miandry ny olon-kafa hitondra hasambarana ho antsika. Eo amin’ny mpivady sy ny mpifankatia indrindra indrindra no tena isehoan’izany.
Rotoroto loatra izao fiainana iainantsika izao, ka indraindray, toa tsy haintsika intsony ny mankamamy ny fiainana.
Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c’est maintenant (Jacques Prévert)
Aza manjeny ny andro ho lava, fa tsy fantatra izay haloakan’ny ampitso ! Tsy misy tompon’ny ho avy isika, fa segaondra kely iray monja dia mety hanova ny fiainana iray manontolo. Noho izany indrindra :
Les vêtements ne vont pas changer le monde ; les femmes qui les portent, si. (Anne Klein)
Zava-dehibe amin’ny olombelona ny fitafiana, satria sady takon-kenatra no miaro amin’ny mety ho hetraketraka avy aty ivelany, toy ny hatsiaka sy ny hafanana…
«On ne peut pas tout vivre, alors l’important est de vivre l’essentiel et chacun de nous a son essentiel » Marc Levy
Natao hankamamiana ny fiainana, araraotina, alaina fy, alain-tsiro. Ianao io anefa dia kely dia kely miohatra amin’izao tontolo izao.
« Cette année, ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent »
Noho ny fitadiavana sy ny henjikenjika andavan’andro dia maro isika no tsy mba mankafy fiainana fa miaina fotsiny. Tsy mahatsapa loatra ny maha-zava-dehibe ny fahazoana tombon’andro fa repotry ny hazakazaka sy ny fitadiavana.
Samy mba manana ny vinavinany amin’ny hoavy ny tsirairay. Na eo amin’ny lafiny ara-bola, ara-boninahitra, arak’asa, ara-pifandraisana, sns satria mba samy te hanana fiainana milamina, ao anaty fahampiana sy fiadanana.
Hanjakan’ny haratsiana ny fiarahamonina hiainantsika ka lasa mifampiahiahy avokoa ny rehetra. ‘Ndeha hiresaka mahakasika ny fitiavana ohatra. Firy firy ireo tovovavy voafitaka satria nahatokitoky tenin-dehilahy ? Firy firy ireo nampitomaniany, nampijaliany, nampahoriany…kanefa dia resy lahatra tamin’ny hatsaran-toetrany sy ny hatsaran-tarehiny tany am-boalohany? Hain’ireo lehilahy tokoa ny mandokandoka, manome teny mamy sy manao tsara fanahy rehefa misy zavatra tadiaviny any amin’ilay vehivavy. Rehefa azony kosa izay ilainy, na leoleo izy dia havadiny ny pejy ka lasa indray izy any an-kafa. Ny tian-kambara dia tsotra : mbola betsaka loatra isika vehivavy no diso manaiky mora loatra ny langolango ataon’ny lehilahy, maro loatra isika no tsy ampy andro vitsy dia roboka, latsa-pitia amin’olon-tsy fantatra tsara akory ka lasa manaotao foana sy mitondra takaitra avy eo. Ny zavatra avoaky ny vavany dia teny ihany, manidina, mandalo…..fa miandrasa fotoana, avelao mihitsy aloha tanterahiny izay lazainy, hataony izay nalokalokainy dia hita eo ny tohiny.